SPC Flooring tsara indrindra Core Core mifanindry Click Lock PVC Vinyl Flooring Manufacturer sy Factory | Iverson
SPC Flooring henjana Core Interlocking Click Lock PVC Vinyl Flooring
SPC dia midika hoe plastika vato vita amin'ny vato. Miaraka amina fotony hentitra, dia famoronana rakotra gorodona vaovao, tontolo iainana bebe kokoa, marin-toerana ary mateza noho ny LVT. Ny gorodona SPPC dia manana vovoka pvc kilasy avo lenta sy vato voajanahary miaraka amina tsindry hidin-trano, izay azo apetraka mora foana amin'ny samy hafa karazana gorodona toy ny gorodona na seramika na gorodona efa misy sns.
Ireo takelaka vita amin'ny vinyl vita amin'ny rano vita amin'ny rano vita amin'ny visy 100% ireo dia mampiasa haitao mandroso voaporofo amin'ny hamandoana, izay tena mety amin'ny rindranasa varotra trano sy haivana. Ny akora fototra vita amin'ny plastika vita amin'ny vato matevina (4.5mm) dia manome kalitao tena tsara, mahatonga ny tany ho mateza kokoa sy mora hitazomana. Ny gorodona dia nandalo ny mari-pahaizana FloorScore, izay afaka mitondra rivotra madio sy madio kokoa ary mitondra kalitaon'ny rivotra tsara ho an'ny tranonao sy ny fianakavianao. Ny sosona ondana efa niorina dia mampihena ny feo, mampihena ny hatairana, ary manatsara ny hafanana sy ny fiononana eo ambanin'ny tongotrao. Ny sosona fototra mahery sy ny mateza mateza mateza dia manamboatra ny gorodona hazo mihidy vinyl azo ampiasaina mandritra ny taona maro. Ny gorodona vita amin'ny hazo vita amin'ny vinina dia azo ampifangaroina, tsy tantera-drano 100% ary mora diovina. Varavaran-kazo vita amin'ny vinina Iverson: gorodona vita amin'ny hazo amin'ny alàlan'ny endriny voajanahary Ary ny loko dia mitondra fahatsapana ahazoana aina kokoa ao an-tranonao. Vita amin'ny fitaovana avo lenta, sariaka tontolo iainana ary azo antoka. Ny fanoherana ny volo sy ny tantera-drano: ny sosona tsy mahazaka akanjo sy ny sarony mifamatotra amin'ny IXPE dia manatsara ny fanoherana ny abrasion sy ny fanoherana ny gorodona. Ny fanadiovana isan'andro sy ny fivoahan'ny rano ao an-tokantrano dia tsy hanimba ny tany. Famolavolana fifampikasohana mialoha: Ny rafitra mifamatotra dia mahatonga ny fametrahana ny gorodonao ho mora kokoa sy azo antoka kokoa, sady mampihena ny feo, mampihena ny hovitrovitra ary manatsara ny fampiononana. Mora apetraka: azo apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, efitrano fandriana, fidirana, lalantsara na toerana hafa misy olona maro. Azo ampiasaina mandritra ny taona maro izy io, miaraka amin'ny antoka ara-barotra maivana mandritra ny 15 taona ary antoka maharitra mandritra ny androm-piainany.
Teo aloha: OEM China Lvt Wpc - WPC Flooring Indoor ho an'ny fandroana fidiovana - Iverson
Manaraka: SPC Flooring avo lenta amin'ny fantsom-boankazo vita amin'ny vily
Fitaovana Spc ao anaty trano
Spc Flooring 4mm Tsy tantera-drano
Spc Flooring 8mm 4mm
SPC Flooring avo lenta amin'ny fantsom-boankazo vita amin'ny vily
WPC Flooring PVC Namboarina vita amin'ny hazo plastika
SPC Flooring 4mm Waterproof Vinyl Floor
Vinyl flooring Luxury pvc plank lvt gorodona
WPC Flooring Indoor ho an'ny gorodon'ny fandroana
ADDRESS No.6 XinYuan Road JiangYin City, faritanin'i JiangSu, Sina